काँग्रेसले खटायो केन्द्रिय प्रतिनिधि, को कहाँ ?
सुर्खेत, २१ वैशाख (जागरण) । स्थानीय तह निर्वाचन सफल पार्नका लागि नेपाली काँग्रेसले प्रदेशनम्वर ६ सहित तीन वटा प्रदेशका जिल्ला जिल्लामा केन्द्रिय प्रतिनिधि खटाएको छ ।
काँग्रेसले सुर्खेतका लागि दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई खटाएको छ भने दैलेखका लागि विश्वप्रकाश शर्माले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
यस्तै जाजरकोटका लागि एन.पी. साउद, कालिकोटका लागि अजयकुमार चौरासिया, मुगुका लागि बद्री पाण्डे, जुम्लाका लागि बीरबहादुर बलायर, डोल्पाका लागि महेन्द्र यादव, हुम्लाका लागि पार्वता डि.सी. चौधरीलाई खटाएको छ ।
यस्तै चन्द्र भण्डारीलाई रुकुम र किशोर सिंह राठौरलाई सल्यान जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको काँग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले ३४ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको हो । पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारहरुलाई जिताउन निर्देशनसहित प्रतिनिधिहरु खटाइएको हो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले ३४ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको नेतृ डिला संग्रौलाले जानकारी दिनुभयो ।